ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): ကယ်လိုရီ မစားတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ဘယ်အရာက ဝိတ်ပိုကျစေသလဲ? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): ကယ်လိုရီ မစားတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ဘယ်အရာက ဝိတ်ပိုကျစေသလဲ?
ကယ်လိုရီ မစားတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ဘယ်အရာက ဝိတ်ပိုကျစေသလဲ?
ကယ်လိုရီ မစားသုံး တာဟာ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ် တာထက် ပိုပြီး ထိရောက် ပေမယ့်လည်း လက်တွေ့မှာတော့ ကိုယ့် ခန္ဒာကိုယ် အချိုးအစားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အတွက်တော့ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာက ပိုမိုပြီး ထိရောက်ပြီး ဝိတ်ကျတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Originally published at - http://health.thithtoolwin.com/2016/05/blog-post_17.html
Posted by Te Tee at 3:20 AM